ISafa ilwa nabazehlisa iminyaka | isiZulu
ISafa ilwa nabazehlisa iminyaka
I-Safa iphenya ngokuhlaselwa kweZambia
I-Safa igcine ngokusikhokhela isangoma
ISAFA ishaqekile ngokushona kukaMadigage
Johannesburg - Inhlangano yebhola yakuleli iSouth African Football Association isihambe olude ukhalo emizamweni yayo yokulwa nokuzehlisa iminyaka kwabadlali.
Isikhulu esiphezulu seSafa uRobin Petersen uthi babe nesivumelwano nabeGerman Football Association, sokuthi basebenzise imishini yabo esezingeni eliphezulu, imishini izoqala ukusetshenziswa ngonyaka ozayo, uma kudlalwa imidlalo yezifunda nezifundazwe.
Imishini izophinda iqinisekise ukuthi okungenani abadlali abangu-3 million bazobhalisa ngokusemthethweni, kube abaqeqeshi nabasizi babo, kuphinde kubhaliswe amaqembu okungenani angu-20 000.
"Lokhu kuzosiza kakhulu ekulweni nokuzehlisa kweminyaka kwabadlali, abadlali bazobhaliswa besebancane. Angeke neze kube lula ukuthi belokhu beshintshashitsha iminyaka yabo," kusho uPetersen etshela abezindaba zeSowetan.
"Sichithe izinyanga ezingu-18 sicwaninga uhlelo oluhamba phambili emhlabeni, sinqume ukusebenzisa imishini lena yaseGermany."
'Isangasithatha isicoco se-CAF Champions League iDowns'
Lowo owayengumdlali weMamelodi Sundowns uRoger Feutmba ukholelwa ukuthi le kilabhu isangasithatha futhi isicoco se-CAF Champions League.
Abadlali beqembu elisemsileni kwi-PSL bathenjiswe amabhonasi
Emizameni yokuvika izembe, iPlatinum Stars isiyethembise abadlali bayo amabhonasi.
Umakhwapheni uzilengisile ngemuva kokubulala intombi ebimala
Kuthiwa uthisha wanikeza umfundi u-R300 wokukhipha isisu
Cpt: 16-24°C Pta: 16-19°C
Jhb: 13-18°C Bloem: 12-19°C
Dbn: 18-20°C PE: 15-25°C
Sandton - 06:38:15 AM TRAFFIC LIGHTS not working on the Grayston Drive offramp - EXPECT DELAYS Ezinye zasemigwaqeni